အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် လုပ်ငန်း စဖို့ အရေးကြီး
အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် လုပ်ငန်း စဖို...
28 ส.ค. 2561 - 22:41 น.
မြန်မာအစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ စတင်ဖို့ အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA အဖွဲ့က ရဲကင်း စခန်း ၃၀ ကျော်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော်ဘက်က နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းဖို့ ဖိလစ်ပိုင် ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း မစ္စ ရိုဆာရီယို မယ်နာလို ဦးဆောင်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတက ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကော်မရှင်က သြဂုတ်လထဲမှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့်တစ်ပတ်ထဲမှာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်မံ တွေ့ဆုံပြီး မကြာခင်မှာ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ စတင် တော့မယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်ပေါ်ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို လောလောဆယ်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က ဖတ်ရှု လေ့လာထားပြီး သုံးသပ်နေတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် လုပ်ငန်းစတော့မယ်
ရိုဆာရီယို မယ်နာလို ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်လဲ
လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ရာမှာ အာဆာတိုက်ခိုက်မှုကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ အပြင် ရေရှည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ပြီး အေးချမ်း သာယာရေးအတွက် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ် ဆိုတာ စဉ်းစား ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရနဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ သူတို့ သွားချင်တဲ့နေရာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားခွင့် မရဘူးလို့ ပြောနေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဘယ်နေရာတွေကို သွားဖို့ ဘယ်တုန်းက လျှောက်ခဲ့တာကို ခွင့်မပြုတာလဲ ဆိုတာ တိတိကျကျ သိရရင် သူတို့အနေနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ လည်း ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် လုပ်ငန်း စဖို့ အရေးကြီး